कुराकानी Archives - Page 13 of 14 - Samudrapari.com
अध्यक्ष पद छाड्नसमेत तयार छु: प्रचण्ड
संविधानसभाको अवसानपछि दलहरू एकअर्काविरुद्ध चर्को आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । त्यहीबीचबाट राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिइएका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ प्रस्ताव कान्तिपुरमार्फत् सार्वजनिक गरे, 'राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा राजनीतिक सहमति भए संविधानसभा पुनस्र्थापनाको बाटो खुल्छ ।' संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन वा पुनस्र्थापनामध्ये एउटा विकल्पमा जाने भन्नेदेखि माओवादीको चरम अन्तरसंघर्षलगायतका विषयमा दाहालसँग कान्तिपुरका गंगा बीसीले शनिबार गरेको कुराकानीः तपाईंको पार्टीको सरकारले संविधानस...
संविधानसभाको विघटन फिल्मको दृष्यजस्तैः प्रधानमन्त्री
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जनताले गरेको आशाअनुसार जेठ १४ गते संविधान जारी हुन नसकेपछि राजनीति झन जटिल अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? नेपाली इतिहासकै असाध्यै जटिल मोडमा हामी उपस्थित छौं । र एक प्रकारले भन्ने हो भने सम्पूर्ण देशवासी नै यतिबेला स्तब्ध छन् । हामीले ६० बर्षदेखि संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको संविधानसभा त्यसमार्फत जनताले आफ्नो संविधान आफैंले बनाउने अधिकारको प्रयास सफलतापूर्वक गर्नुपर्ने थियो त्यसमा हामी चुक्यौं र जेठ १४ गते संविधान जारी हुन सकेन । यो असाध्यै दुखद क्षण हो । ...
बिहानसम्म नथप्ने पक्षमा थिएँ: प्रधानमन्त्री
संविधानसभाको म्याद थप्ने अचानक प्रस्ताव किन आयो ? हामी अहिले पनि जेठ १४ भित्र संविधानका विषयमा सहमति खोज्न लागिरहेका छौं । हामीले यो तोकिएको समयमा संविधान पूरा गर्न सेना समायोजनको काम एकपक्षीय ढंगले जोखिम मोलेर अघि बढायौं । त्यसपछि संविधानका नमिलेका विषयमा सहमति खोज्न हामीले रातदिन प्रयास गर्‍यौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरू जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने प्रयास गरेकै हो । यो समयभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्न हामीलाई समयको चाप पर्‍यो । कांग्रेस एमालेको पुरानो सोच र माओवादी मधेसवादी दलको नयाँ सो...
जेठ १४ अघि नै आउँछ: उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौला
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको मिश्रित शासकीय स्वरूप र बहुपहिचानसहितका ११ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुने आधार तयार भएको छ । यही सेरोफेरोमा कांग्रेस महामन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौलासँग कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपाने र गंगा बीसीले गरेको कुराकानीको सारस‌ंक्षेप । कस्तो सहमति भयो ? नाम र सीमांकन पछि हुने गरी ११ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । दुई प्रदेशबीच विवाद भई छुट्टनि या जोडिने भए त...
एमाले अरुले छाडेको जुठो खाँदैनः झलनाथ खनाल
माओवादी–मधेसवादी गठबन्धन तोडाउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रमुख दलहरु सहमत भए । पाँच बुँदे ‘राजनीतिक सहमति’मा माओवादी, कांग्रेस, मधेसी मोर्चाको नेतृत्वसँगै संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि हस्ताक्षर गरे । सहमतिबमोजिम बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अन्य दल सामेल भए पनि एमाले बाहिरै रह्यो । केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेतृत्वको हस्ताक्षरमा नै गम्भीर प्रश्न उठाएपछि एमाले सरकारमा नजाने निर्णयमा पुगेको छ । यसै प्रसंगमा कान्तिपुर संवाददाता दुर्गा खनालले एमाले अध्यक...
युरोपका स्वार्थी काँग्रेसले पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पारेका छन् – यूरोप संयोजक, दिल गुरुङ
आफूलाई सबैभन्दा पूरानो र जेठो प्रजातान्त्रिक दल बताउने नेपाली काँग्रेस’ स्वार्थी कार्यकर्ताका कारण कहिल्यै पार्टी विवादबाट माथि उठ्न सकेको छैन । पार्टी विवादको रोग देशभित्र मात्रै होइन, विदेशमा समेत संक्रमित भएको छ । धन कमाउने सपना पाल्दै देश त्यागेर वा छाडेर विदेशका विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपालीहरु त्यहां पनि विभिन्न स्वार्थमा परेर राजनीति गर्ने नाममा विभिन्नखाले बखेडा झिक्ने गरेको पाईएको छ । नेपालमा राजनीति गर्दागर्दै होस् या उतै गईसकेर राजनीतिमा सक्रियता जनाएका किन नहोउन, पार्टी हितमा भन्दा प...
बिबाहको बारेमा पछि सोचौंला: मुना थापा
नेपालको लोकदोहोरी क्षेत्रका चर्चित गायिका मुना थापाले आफ्नै एल्बम "छोरी" "तिते करेली" लगायतका गीति एल्बमबाट ख्यात्रि्राप्त गरेकी छिन् भने हालमा उहाँको दर्जनौ एल्बमहरु बजारमा आइसकेको छ । आजको सन्दर्भमा उहाँ एउटा गलाकी धनी र कुशल लोकदोहोरी गायिकाको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँले देश तथा विदेशमा धेरै कार्यक्रमहरुमा भाग लिईसक्नुभएको छ । गत २४ फेव्रुअरी २०१२ मा ३० औं मगर दिवसको कार्यक्रमको अवसरमा अतिथि कलाकारकोरुपमा दुबईमा पुग्नुभएका गायिका थापासंग त्यहाँका पत्रकार लालबहादुर ढेंगाले गर्नुभएको वार्ता...
‘नगरेको कुरा के भनूँ त?’
बिन्दास कोमलमा विवाद र प्रसिद्धिलाई एकैसाथ थेग्न सक्ने क्षमता छ। उनी आफ्ना राजनीतिक सम्पर्कका कारण विवादमा आइरहेकी हुन्छिन् र आफ्ना मौलिक शब्दका कारण प्रसिद्धिको सुख भोगिरहेकी हुन्छिन्। 'पोइल जान पाम्' भन्ने उनको गीतले नेपाली संगीतमा ठूलै तरंग ल्याएको थियो। तरंग नआएसम्म त कोमल ओलीको चित्तै बुझ्दैन। नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा उनको गायकीको अर्को कुनै जोडा छैन भने पनि हुन्छ। 'मलमल किरी जुनकिरी' बाट लोकप्रियताको शिखर चुमेकी गायिका कोमल ओलीको लोकलयको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान छ। संगीत र मनोरञ्जन...
‘पार्टीमा मेरो रोलनम्बर- ४ हो’
नेकपा एमालेको आठौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्, वामदेव गौतम, ६४ । पार्टी बहुमतीय प्रणालीमा गएपछि भएको चुनावमा तीन उपाध्यक्षमध्येका एक उनी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि सक्रिय मात्र छैनन्, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि भइसकेका छन् । महाकाली सन्धिको विवादपछि पार्टी फुटाएर नेकपा माले बनाउनेमध्येका एक उनी पछि फेरि एमालेमै फर्किए । आठौँ महाधिवेशनपछि माओवादी निकट रहेको आरोप खेपिरहेका उनी पछिल्लो समय पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा लागेका कारण चर्चामा छन् । उनीमाथिका आरोप, पार्...
‘मन्त्रीहरु नै ठूला भ्रष्टाचारी’
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । के कारणले होला ? भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य दोषी राजनीतिक पक्ष हो । राजनीतिक दल र दलबाट चुनिएर आएका शासकको भ्रष्ट प्रवृत्ति र बेइमानीका कारण नै नेपालमा भ्रष्टाचार वर्षेनी बढेको हो । राजनीतिक नेतृत्वमा सदाचार, इमानदारी र नैतिकता नहुँदासम्म भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ । हाम्रा नेता तथा शासकमा सदाचार, इमानदारी र नैतिकताको खडेरी छ । त्यसैले हामीकहाँ भ्रष्टाचार अत्यधिक रूपमा बढेको हो । राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारी र प्रतिबद्धता नहुँदासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनै सक...